Ka soo kabashada Google Panda | Martech Zone
Saturday, April 23, 2011 Sabtida, Oktoobar 29, 2011 Douglas Karr
Shirkado faro ku tiris ah oo aan ogahay inay ku dhaawacmeen isbeddelka algorithm ee loogu magac daray Eygan. Panda waxaa diirada la saaray oo la bartilmaameedsaday ka kooban beeraha laakiin leeyahay saameyn ku yeeshay ganacsiyado badan. Mid ka mid ah saaxiibkey ayaa ku khasbanaaday inuu shaqada ka ceyriyo shaqaalihiisii ​​ugu horeeyay sababtuna ay tahay lumintooda darajaynta adeegga hagaha xirfadeed ee horseeday qiimeynta illaa toban sano. Maanta, waxaan joojinay xiriir aan la yeelanno mid ka mid ah macaamiisha aan ugu jecel nahay. Khasaaradoodii weynaa ee dakhliga xayeysiinta ayay ahayd in lala macaamilo (wali waan sii wadeynaa inaan taageerno maadaama aanan shaki ka qabin in taraafikada ay soo noqon doonaan).
Waxaan maanta la kulmay macmiilka oo qolku si gaar ah buu u xumaaday. Waxay ku hayaan cadaadis badan inay sii wadaan kobcinta dakhliga, marka dib u dhac sidan oo kale ah ayaa weyn. Nasiib wanaag, wax soo saarkoodu waa mid soo jiidasho leh, sidaa darteed waxaan kugula taliyay inay si adag u eegaan ciyaaraha si ay u qaataan taageerayaashooda xiisaha leh ayna u abuuraan jawi si joogto ah loogu abaalmariyo laguna aqoonsado ka faa'iideysiga adeegga ay bixiyaan.
Dhinaca hagaajinta mashiinka raadinta, hadalku xoogaa wuu ka adkaaday. Markay Google jeceshahay beeraha wax ka kooban, waxaan ku riixnay kaabayaasha inay si toos ah u daabacaan waxyaabaha. Mawduuc gaar ah oo ka mid ah arsenal wuxuu yeelan karaa 22,000 bog hoostiisa - dhammaantoodna waannu riixnay. Boggu aad buu u weynaa, laakiin si ku habboon ayuu Google uga faa'iideystay - cirka isku shareeray taraafikada iyo dakhliga.
Kahor Panda (Google wali wuxuu sii wadaa isbeddelka), way fududahay in la daabaco waxyaabo cusub oo sifiican uwanaagsan waxyaabahaas. Waxay u muuqatay in darajaynta wanaagsan ee shuruudaha qaarkood ay saameyn ku yeelatay awoodaada inaad daabacdo nuxurka oo aad kuhesho keywords xiga - xitaa haddii aysan aad u khuseyn. Mar dambe maahan.
Ka dib Panda, algorithm wuxuu umuuqday in gadaal loo dhigayo. Bogag kasta oo ka jiray goobta oo aan kala saarin ama wadin taraafikada ayaa runtii noqday culeys aad u weyn oo hoos u dhigay bogga oo dhan. Muddo 4 bilood ah oo toos ah ayaan daawanay barta sii socota ee hoos u sii dhaceysa - kaliya ma ahan qiimeynta, laakiin waxay si aad ah ugu sii fureysaa ereyada muhiimka ah ee bixiyay mugga raadinta ugu badan. Ma wanaagsan.
Marka maxay sameeyaan shirkadaha dhaawacay algorithm Google Panda samee xiga?
Ka takhalus bogagga nuugaya. Bogagga liita ee leh qiime yar, nuxur liita, saameyn hoose iyo darajo liidata ayaa hoos u soo jiidaya bogagga waaweyn ee boggaaga. Hada ka takhalus.
Haddii aad leedahay dhul-beereed jiif ah… oo macnaheedu yahay ma jiraan tillaabooyin fara badan oo aad ku dhex mushaaxayso inta u dhexeysa boggaaga guriga iyo bogga ugu hooseeya ee boggaaga ink dib uga fikira darajooyinkaaga. Halkii aad ku soo daabici laheyd waxyaabahaaga waaweyn oo ballaaran mowduucyada dabada-dheer… u burburi macluumaad yar oo macluumaad ah. Tusaale: Haddii aan ku leeyahay degel ku saabsan suuq geynta oo dabada-dheer ay tahay sida loo kala safto Google… halkii aan ka heli lahaa hal bog oo ku saabsan sida loo kala doorto google, waa inaan haystaa bog cinwaankeedu yahay Suuqgeynta iyo Google oo isu geyn badan ka kooban koox-hoosaad caqli badan.
Sii wad kor u qaadida boggaga weyn iyo darajada wanaagsan ee aad haysato. Si aad isaga caabbiso miisaanka bogagga waxqabadka liita, waxaad u baahan tahay inaad sii waddo kor u qaadista bogagga ku dhex yaal bartaada si fiican u shaqeynaya - kaliya si loo sii wado darajadooda.
Ku ful dhammaan dhinacyada kale ee SEO si aan fiicnayn - oo ay ku jiraan robots.txt, sitemaps.xml, pinging, bog dhisid, iwm. Mar dambe ma jiri doonto meel u gaar ah khaladka ama caajisida beertaada. Jooji cudurdaarka oo hagaaji bartaada. Hagaaji tayada, matalaadda, xawaaraha… wax walba oo ku saabsan.
Beeraha ku jira ma aha wax xun (Google wali wuu jecel yahay Wikipedia). Socodsiinta goob ka faa'iideysaneysa matoorada raadinta oo soo bandhigaysa waxyaabo badan oo muhiim ah, oo khuseeya ma ahan wax xun Macaamiisha ayaa qadarinaya waxyaabaha wanaagsan (xitaa haddii Panda iska indhatiro). Ku shaqeynta beer wax ka kooban ayaa ka dhib badneyd tan iyo Panda, in kastoo, maxaa yeelay hadda mugga cotent aad soo saareyso waxaa la kulmay fikrado badan oo diidmo ah oo ku saabsan waxaad isku deyeyso inaad gaarto.
Diiwaangelinta warbaahinta bulshada si loo kordhiyo loona dhiirrigeliyo, iyo sidoo kale hirgelinta istiraatiijiyado kale oo kaqeyb qaadashada isticmaalaha sida emaylka, kobcinta iyo isweydaarsiga, waxay qaadan kartaa tiro badan oo booqdayaal ah oo aad ka dhigi karto dulduleeladaada adoo u rogaya booqdayaasha soo noqnoqda.
Kormeerka Qeybinta Darajada Keyword?
Apr 23, 2011 at 10: 14 PM
Marka markale wax waliba waxay ku soo dhacayaan tayada tiro ahaan.
Apr 23, 2011 at 10: 42 PM
Xaqiiqdii waa dheelitir, Atul. Hal boosteejo oo qumman ayaa iibin kara waxyaabo yar… laakiin boqol meelood oo waaweyn ayaa iibin doona wax intaa ka badan. Toogashada tan oo ah waxyaabo macaan ayaa had iyo jeer keenta booqdayaashaas booqdayaasha - laakiin waxaan ka shakisanahay inay waligeed runti isu rogtay lacag caddaan ah oo ay lahaan lahayd.
Apr 29, 2011 at 3: 54 PM
Sidoo kale waa inaad xusuusnaataa in google uu hadda abaalmarinayo bogag kuwaas oo kaalinta ugu sarreysa ku leh walxaha dhejiska, taasi waa sababta goobaha cayaaraha ay hadda uga faa'iideysanayaan si aad u ballaaran.
Jul 4, 2011 markay ahayd 9:42 AM
Tani waxay ahayd maqaal aad u fiican. Boggeyga 'HostingPost.com' waa goleyaal waa weyn oo ballaaran laakiin si xun ayaa loo garaacay, hoos u dhacay 90% oo wali hoos u dhacaya… Weli waan ka doodayaa haddii aan doonayo inaan isku dayo wax kale gebi ahaanba. Mahadsanid
Jun 21, 2012 saacadu markay ahayd 12:09 AM
Heerka bounce wuxuu cabiraa howlaha akhristaha
in aad blog. Taasi waa, qoraal gaar ah maxay akhriyeen markay
kusoo degay boggaaga. Haddii dadku waqti tayo badan ku qaadan karaan kanaga
blog, tani runti way ku wanaagsan tahay isha Google.
Markii iigu dambaysay ee aan qiimeeyo heerka kacsanaanta aniga oo adeegsanaya falanqaynta Google, waxay ahayd
56%. Heerka aasaasiga ah, tani waa mid dhiirigelin leh laakiin weli wax badan ayaa iiga jira
shaqeeyaan si loo sameeyo si loo yareeyo boqolkiiba.
Hoos u dhig heerarka boodboodiyuhu waxay u fiican yihiin bartaada. Haddii aad soo kabato
qiimayaashu waxay hoos ugu dhacaan 50 - 100%, waxaad fiicnaan laheyd inaad bilowdo qorista waxyaabaha ku mashquulsan
taasi oo ka caawin kara akhristayaasha qaab aad u qaas ah. Ku talin qoraallada ku habboon
kuna dhiiri geli faallooyinka.
Jul 6, 2012 markay ahayd 9:05 AM
Qodobka Weyn, waxaan u maleynayaa Panda, Google wuxuu isku dayayaa inuu baabi'iyo qof kasta oo SEO ah oo ka caawiya helitaanka darajo wanaagsan adigoon isticmaalin Adwords. Anigu shaqsiyan waxaan u maleynayaa inay wax yar sii qaateen, waxaan qiyaasayaa inay isku dayayaan inay shilimaan kasta ka saaraan dadka internetka. Waxay rabaan inay ka dhigaan wax walba fursad.
Jul 28, 2012 markay tahay 10:51 PM
Daacadnimo dhan, ka dib markaan eegay bartaada, waxaan u maleynayaa inaan ka shaqeyn doono hirgelinta nidaam maarayn maareyn oo la soo dhoofiyo waxyaabahaaga. Waxaan u maleynayaa inaad ku rafaadi laheyd xiriirro badan oo bogga ku yaal awgood.